Echefukwala ikwusara ndị a na-azọpụtaghị ozi n'ịntanetị
Ugbu a ọgbakọ dị iche iche na ụlọ ụka na-aga n'oge ịntanetị na corona, ha agaghị agharị ozi ozi nzọpụta banyere Jizọs Kraịst maka ndị a na-azọpụtagh&
N’oge Baịbụl, ha na-aga ikwusa ozi ọma n’okporo ụzọ na n’ámá. Taa, okporo ụzọ na ogige ndị dị n'ịntanetị. Ka anyị pụọ ebe ndị mmadụ nọ n'okporo ụzọ na ogige ndị dị taa: ụgbụ.
Sụchaa ụgbụ niile
Jizọs kwuru na anyị ga-aga n'ụwa niile kwusaara ihe niile ekere eke ozi ọma.
Taa, ụwa dị n'ịntanetị. Ndị mmadụ nọ n’ onlinentanet n’ọgbakọ dị iche iche na mgbasa ozi ọha. Mgbe ahụ ọ bụghị ihe ọjọọ anyị ịbanye n'ịntanetị ma gbaa akaebe ịkọrọ ndị na-eme ihe n'ebe ahụ banyere Jizọs.
Ozi kacha mkpa
Ozugbo anyị na-aga n'okporo ụzọ na n'ámá nke taa, anyị agaghị echefu ozi kacha mkpa anyị nwere maka mmadụ ibe anyị nọ ebe ahụ. Ya bụ, Jizọs Kraịst na a zoputara gị mgbe ị nabatara ya.
Anyị ga-elekwasị anya na ndị ọhụrụ na ndị a na-azọpụtaghị. Ya mere, anyị anaghị echigharịkwuru ndị a zọpụtara ma na-ekwusara ha ozi ọma. Ọ dịghị, anyị ga-erute ndị a na-azoputaghi. N’ihi ya, ka anyị zie ha ozi ọma.
Chineke akpọwo m onye mgbasa ozi-ọma, mana ahụwo m nfe ọ dị mfe iduzi nkwusa ya nye ndị a zọpụtara. Ka anyị ghara ịdaba n'ọnyà ahụ.
N'ihi na ọ bụrụ na anyị anaghị ekwusa ozi nzọpụta nye ndị a na-azọpụtaghị, ha agaghị anụ ozi nke Jizọs, ha agaghị enwe ohere ka a zọpụta ha. M na-ekwukwa ya ọzọ: ka anyị ghara ịdaba n'ọnyà nke ịghara izi ndị na-azoputaghi ozi ọma kama ọ bụ naanị ndị a zọpụtara.
Achọpụtakwala m na mgbe anyị na-ekwusa ozi nzọpụta maka ndị a na-azọpụtaghị, a ga-eme ka ndị a zọpụtara sie ike ma too na okwukwe ha. A ga-agba ha ume na okwukwe ha ka anyị n’ikwusa ozi nke nzọpụta a na-azoputaghi n’ime Jizọs Kraịst.
Vecka 18, lördag 8 maj 2021 kl. 16:18